Imibono yokuhlobisa ikhaya lakho ngopiyano olukhulu | Bezzia
UMaria vazquez | 11/10/2021 20:00 | Ifenisha
Udlala upiyano? Ngabe ukhona ekhaya ofunda ukudlala le nsimbi? Uma kunjalo, kungenzeka ukuthi unayo upiyano lodonga ekhaya. Yibo abaziwa kakhulu futhi kunezizathu ezimbili eziphoqayo zalokhu: bathatha isikhala esincane futhi bashibhile kunopiyano olukhulu.
Ama-pianos amakhulu mahle kakhulu kepha zidinga ukuba nendawo ebalulekile yokuzihlalisa ekhaya. Uma lokho kungeyona inkinga kuwe, namhlanje sikunikeza imibono yokuhlobisa ikhaya lakho ngopiyano olukhulu futhi ulusebenzise ngokugcwele, ukhuluma ngokuhlobisa.
2 Indawo engcono kakhulu
2.1 Eduze kwewindi egumbini lokuphumula
2.2 Eceleni kwezitebhisi
2.3 Endaweni yangasese
Amapiyano amakhulu amnyama zithandwa kakhulu. Yilezo esivamise ukuzithola emakhaya kanye nalezo ezisebenza njengezinsimbi kumakhonsathi nakuma-recitit. Zinhle kakhulu, akunakuphikwa. Kodwa-ke, akuyona ukuphela kwendlela; Ungabheja futhi kuma-piano amakhulu ansundu namhlophe ukuhlobisa ikhaya lakho.
Njengenjwayelo lapho sikhuluma ngombala, ukukhetha okulungile kuzodlalela thina uma kukhulunywa ngokufeza isitayela esithile egumbini lokuphumula. Ama-piano amnyama amnyama angena kunoma iyiphi imvelo, kepha-ke, uma ufuna ukunikeza igumbi isitayela sesimanje kepha sikhululekile futhi semvelo, upiyano onsundu ingaba umlingani wakho omkhulu. Futhi ilitshe? Okumhlophe kuchichima ubuntu futhi kufanelana kahle ezindaweni zesimanje nezobuciko.
Indawo engcono kakhulu
Igumbi lokuphumula Ngokuvamile kuyindawo ejwayelekile yokubeka upiyano olukhulu, ngoba liyikamelo elikhulu kunawo wonke endlini. Okunye ukuphazamiseka okujwayeleke kakhulu ukuhlobisa ikhaya ngopiyano omkhulu imvamisa kungukungabi nendawo, ngakho-ke kunzima ukuthi uma singatholi indawo egumbini lokuphumula singakwenza kwelinye igumbi. Kepha ingabe ukuphela kwendlela? Vele akunjalo.
Eduze kwewindi egumbini lokuphumula
Uma umbono wakho ukubeka upiyano omkhulu egumbini lokuphumula, thola indawo yawo eduze kwewindi. Ngakho-ke, ungasebenzisa ukukhanya kwemvelo lapho ufuna ukudlala upiyano. Beka umugqa ofudumele ngaphansi kwepiyano, isibani sesimanjemanje phezu kwawo, nezithombe ezithile odongeni ukwakha ukuhlangana okuhehayo nobuciko.
Uzodinga futhi isitulo sokudlala upiyano nesihlalo noma isikhwama esinethezekile uma kwenzeka othile efuna ukuhlala phansi akulalele. Uma kulesi sikhala noma eduze kwaso unethuba lokufaka ishelufu lomsebenzi, ungabeka zonke izincwadi zakho nezikolo kuso.
Ezindlini ezinkulu ezine izitebhisi ezimaphakathi nendawo enkulu ezungeze lezi, ungakusebenzisa lokhu ukubeka upiyano. Kuyindlela enhle yokugcwalisa isikhala esivame ukuba ngehholo noma igumbi lokuphumula futhi okungelula ngaso sonke isikhathi ukuhlobisa.
Izitebhisi ezinhle nezindonga ezihlanzekile konke okudingayo ukwenza upiyano lwakho olukhulu lubukeke luhle. Ungomunye wemibono yokuhlobisa ikhaya lakho ngopiyano olukhulu. eyinkimbinkimbi futhi ekhethekile, kunjalo. Kuzoba yinto yokuqala izivakashi zakho eziyibonayo lapho uzamukela ekhaya.
Unayo i-attic encane noma igumbi elingenalutho ekhaya? Lokhu kungaba isikhala esilungele ukufaka upiyano olukhulu nokuzijwayeza. Awudingi ukuthi ibe nkulu kakhulu; Uzodinga kuphela isikhala sepiyano, izihlalo ezimbalwa kanye nendawo yokugcina izinto zakho kanye nomculo weshidi.
Uma unesikhala sokuyiguqula ibe yigumbi lepiyano okuhle ukuthi kungangenwa umsindo. Ngakho-ke ungazivocavoca kakhulu ngangokunokwenzeka ngaphandle "kokuphazamisa" amanye amalungu omndeni noma ngaphandle kokuphazamiseka. Uzokwazi ukugxila kupiyano. Yize uzodinga imisindo engaphezu kwemisindo embalwa ukugxila. Futhi kunzima ukugxila esikhaleni uma kubanda futhi kungamukeleki.
Beka ukhaphethi esikhaleni, izihlalo ezithile, unobhala omncane -Uma ubhala owakho umculo- futhi unakekele ukukhanyisa, ikakhulukazi uma ungenakho ukungena okuhle kokukhanya kwemvelo. Hlanganisa ukukhanya okujwayelekile nokunye okusondele kakhulu okukuvumela ukuthi ufeze izindawo ezahlukahlukene.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Ifenisha » Imibono yokuhlobisa ikhaya lakho ngopiyano olukhulu